Araadni tapha sagalee fi fakkii daa’ima waggaa 13 nyaata dhoowwe – Fana Broadcasting Corporate
Araadni tapha sagalee fi fakkii daa’ima waggaa 13 nyaata dhoowwe
Finfinnee, Gurraandhala 19, 2011 (FBC)- Maatiin daa’ima waggaa 13 araadni tapha sagalee fi fakkii nyaata dhoowwee dhimmi isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ajandaa guddaa ta’eera.
Daa’imni lammii biyya Filiippiins umuriin isaa waggaa 13 ta’e kun araada tapha sagalee fi fakkiin qabamee oolmaa isaa intarneet kaaffee keessa godhachuun haadha isaa umurii waggaa 37 Lilaybeez Marvaalitti hojii manee guddaa ta’eera jedhameera.
Daa’imichi intarneet kaaffee toora mana jireenya isaanitti argamu yeroo hunda deemuun tapha sagalee fi fakkii sa’aatii 48 dheeratu akka taphatu ibsameera.
Sababa araada tapha kanaan daa’imichi sa’aatii ciree fi laqanaati gara manaa deemuu waan dhiiseef haadhi isaa Lilaybeez Marvaal gara daa’imni isaanii itti argamu deemuun nyaata afaan ka’aa jiraachuu ibsameera.
Nyaata haadhi isaa gara intarneet kaaffee fidanii dhaqaniif nyaachuuf illee daa’imichi taphicha akka addaan hin kunne beekameera.
Haaluma kanaan daa’imichi tapha koomputeeraa osoo addaan hin kutin yeroo mara nyaaticha haadhi isaa akka afaan isaa keessa ka’aan gabaasichi mul’iseera.
Yuunvarsiitii Miisisiippii fi Neevaraaskaan jijjiirrama Ityoophiyaa akka deeggaran…